Listings in ပိုးမွှားနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ and ပလတ်စတစ်ကြိုစက် လုပ်ငန်းများ | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in ပိုးမွှားနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ and ပလတ်စတစ်ကြိုစက် လုပ်ငန်းများ
in ပလတ်စတစ်အိတ် အမျိုးမျိုး, ပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း, ပလတ်စတစ်ကြိုစက် လုပ်ငန်းများ, ပလတ်စတစ်ဈေးဝယ်အိတ် (ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ချိ)
အမှတ် ၁၂၄၊ ဟားခါးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ (၂၃)ရပ်ကွက်၊, ,
09-253771133 , 01-590433
Bentz Jaz Myanmar Co.,Ltd.
အမှတ် ၅၀၇/၁၄၊ ပြည်ရိပ်သာလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊, ,
01-2305940 , 09-5032875
01-2305940, 09-5032875, 09-777880071, 09-767045248
GITE Pest Control
အမှတ် ဒီ-၈၊ ၃၅လမ်း၊ သီရိရိပ်သာ၊ (၇၀)လမ်း နှင့် (၇၁)လမ်း ကြား၊, ,
09-43177207 , 09-8624930
09-43177207, 09-8624930, 09-444010203, 01-3684645, 01-3682112
in ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး, ပလတ်စတစ်ကြိုစက် လုပ်ငန်းများ
Yee Yee Tun International Co., Ltd
အမှတ် ၁၂၈၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊,
01-211248 , 01-223026
အမှတ် ဒီ-၈၊ ၃၅လမ်း၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ သီရိရိပ်သာ၊, ,
in ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများ, ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးမျိုး, ပိုးမွှားနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ
GREEN PEST MANAGEMENT CO., LTD.
အမှတ် ၅၁၊ ရွာလယ်လမ်း၊ ၅၃လမ်း နှင့် ၅၄လမ်း ကြား၊ ထွန်တုံး၊, ,
09-444459845 , 09-441988816
General Inspection & Testing Enterprise Ltd.
အမှတ် ဒီ-၈၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ သီရိရိပ်သာ၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-5169073 , 09-444010203
09-5169073, 09-444010203, 09-43177207, 09-8624930
အမှတ် ဒီ-၈၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ သိရိရိပ်သာလမ်းသွယ်(၃)၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-8624930 , 09-5169073
09-8624930, 09-5169073, 09-43177207, 09-444010203
Yee Yee Tun International Co., Ltd.
၄ထပ် ၊ ၉၉ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ၉၉ ကွန်ဒို၊ အနောက်ဝင်ပေါက်၊, ,
09-450622263 , 09-450622264
အမှတ် ၃၈၂/ဘီ၊ ၇၆လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊, ,
09-2018034 , 09-962018034
အမှတ် ၃၈၂/ဘီ၊ ၇၆လမ်း၊ (၃၀)လမ်း နှင့် (၃၁)လမ်း ကြား၊, ,
Min Naing Khant Co.,Ltd.
အမှတ် န-၉/၂၊ ၄၂လမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-421122330 , 09-420039333
09-253771133, 01-590433, 01-590187
01-590433, 01-591349, 09-253771133, 09-43111631